यो नयाँ शक्ति हो कि एनसेल (प्रा) लि हो ? – YesKathmandu.com
आइतबार ३०, जेठ २०७३
राजधानीबाट निस्कने व्रोडसिट मिडियाको पहिलो पाना आज वावुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमय बनेको छ । प्रचार सामाग्री हेर्दा यस्तो लाग्छ ,यो कुनै पार्टीको विज्ञापन नभएर कुनै (प्रा) लिको विज्ञापन हो । कान्तिपुर,अन्नपूर्ण,नागरिक,राजधानी,कारोवार,अभियान,नयाँ पत्रिका,समचारपत्र,राजधानी लगायतका व्रोडसिट मिडियामा विज्ञापनका लागि मात्र नयाँ शक्तिले करोडौं खर्चिएको देखिन्छ ।
यो रकम कुनै भुकम्प पीडित बस्तीमा खर्चिको भए बाबुराम भट्टराईको वौद्धिकताको प्रंशशा नै हुन्थ्यो । तर यो भड्किलो विज्ञापन के का लागि ? आज नयाँ शक्ति नेपालको पार्टी स्थापना सभा आयोजना हुँदैछ ।
नयाँ शक्ति नेपालले आइतबार प्रकाशित भएका लगभग सबै राष्ट्रिय दैनिकको पहिलो पृष्ठमा पूर्ण आकारको विज्ञापन छापेको छ ।रातो पृष्ठ भूमिमा सेतो तारासहित नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको तस्विर विज्ञापनमा राखिएको छ । देशभरबाट १ लाख नयाँ शक्ति अभियानता कार्यक्रममा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ ।अरु भन्दा नयाँ भनिए पनि सामन्ती सोच र चिन्तनबाट यो पार्टीका बुज्रुकहरु पनि मुक्त छैनन् भन्ने कुराको पृष्ट यहि भड्किलो विज्ञापनले गर्दैन र ?
किर्ते काण्डमा प्रचण्डका ज्वाई प्रहरी छानविनमा
ग्यास किन्न नेताको सोर्स
निर्वाचन गर्न छाडेर सरकार अन्यत्र छलकपटमा लाग्यो :अध्यक्ष ओली
राष्ट्रियसभामा पनि गठबन्धकै वर्चस्व ( कहाँ कसले जिते सुचीसहित )